Chautari Daily » पर्यटक वृद्धिदरमा नेपाल एसियामै पहिलो
काठमाडौँ, ३० असोज : पर्यटक आगमन वृद्धिदरको हिसाबले नेपाल एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा परेको छ । प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा)ले सार्वजनिक गरेको यस क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१८ मा यस्तो वृद्धिदरमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि रहेको हो ।
पाटाका अनुसार उक्त वर्ष नेपालको पर्यटक आगमन वृद्धिदर २४.८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालपछि रहेको टर्कीमा २१.८ प्रतिशतको वृद्धिदर छ । त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेको भियतनामको १९.९ प्रतिशत, चौथो स्थानको निकारागुआको १७.५ प्रतिशत र पाँचौँ स्थानमा परेको दक्षिण कोरियाको
१५.५ प्रतिशत वृद्धिदर छ ।
पाटाका अनुसार सन् २०१८ मा यस क्षेत्रका ४६ देशमा ७० करोड ८० लाख विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यस्तै सन् २०१७ को तुलनामा ७.३ प्रतिशतले बढी पनि हो ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका देशमध्ये २४ प्रतिशत देशको वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । ६५ प्रतिशत देशको भने पाँच प्रतिशतभन्दा माथि वृद्धिदर रहेको उल्लेख छ । नेपालले सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार विदेशी पर्यटकको स्वागत गरेको थियो । १० लाख पर्यटक भित्र्याउने वर्षाैंको लक्ष्य नेपालले सोही वर्ष पूरा गरेको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रकाशित मिति ३० आश्विन २०७६, बिहीबार १४:०८
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ : तोलाको कति छ अहिले ? हेर्नुहोस्
कतार जान लागेका नेपालीहरुलाई दुखको खवर
संखुवासभा अपडेट : बुहारी रञ्जानाको हराइरहेको मोबाइल भेटियो, के थियो मोबाइल भित्र ?
पवित्रालाई टीकटककै कारण सेतिले लग्यो ? सँगै गएका २ जना साथिहरु यस्तो भन्छन ? (भिडियो)
मुटुको उपचार गराउन हिडेकी महिलाको बाटैमा मृत्यु
आखा चिम्लेर पानी खेल्दाखेल्दै यसरि खसेकी रहिछन पवित्रा [भिडियो पार्ट ३]
काठमाडौँबाट ओखलढुंगा जादै गरेको बोलेरो जीप भिरबाट ख’स्दा ३ जनाको मृत्यु
संखुवासभा ६ जना ह’त्या प्रकरण : लोकबहादुरका भाइ पक्राउ, भाइको साथबाट भेटियो यस्तो सामान